Ukwazi ukuba iiyunithi ezizimeleyo zisebenza njani namhlanje kusinika ulwaneliseko lokwazi imvelaphi yezinto kodwa sisebenzise ithuba lokuqhubela phambili. Kwenzeka kuthi kuthi abo babezazi iindlela zesiko zokwenza iifoto, kunye nokusikelwa kwabo umda; xa umjikelo wokubamba, ukulungisa ingxaki, ukumodareyitha kunye nokuvelisa imveliso yokugqibela kuthathe iiveki, ...
Okufumaneka, ezintsha, Topography
Kwiveki ephelileyo bendithetha nomhlobo waseCanada ondixelele ngamava ababenawo ekusebenziseni i-GIS Pro kwiinkqubo zophando ze-cadastral. Siphantse safika kwisigqibo sokuba nangona zikho ezinye izixhobo, kwinto ekuleVenkile yeApple ukuba ayizizo ezilungileyo ze-iOS, i ...
Apple - Mac, Geospatial - GIS, SuperGIS, Topography
Kuqhelekile, xa kusenziwa ukuthengwa kwezixhobo zokuhlola, kuyafuneka ukuba kwenziwe uthelekiso lweGPS, izitishi zizonke, isoftware, njl. Geo-matching.com yenzelwe oko kanye. Ukulinganisa i-Geo yindawo ye-Geomares, inkampani enye epapasha iphephancwadi le-GIM International. Ukuba siyakhumbula, eyona nto iphambili kweli phephancwadi kuku ...
Eli ligama leNkomfa yokuQala ye-Ibero-American yeTopographic, Geodetic kunye neGeomatic Engineering ezakubanjelwa eJalisco, Mexico. Umnyhadala uphakanyiswa ziiKholeji zaseMexico ezili-11 zeeNjineli zeNdawo, kwaye uzakuqala nge-16 ukuya kwi-18 ka-Okthobha ka-2013. Eyona njongo iphambili kukwakha umbono wezi ...
cadastre, Zobunjineli, Topography
ISuperSurv sisixhobo esenzelwe ngokukodwa i-GPS kwi-Android, njengesicelo esidibanisa ukusebenza kwe-GIS apho idatha inokufakwa khona ebaleni ngokufanelekileyo nangezoqoqosho. IGPS kwi-Android Inguqulelo yamva nje, iSuperSurv 3 ijika iselfowuni ibe ngumqokeleli, ngokubekwa kwendawo, ukubonisa imephu, ukubonisana, ukulinganisa kunye nokujonga ...
GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala, SuperGIS
Lixesha lokuba ukhangele amaphephancwadi anokuphuma kwawo kutsha nje; Apha ndishiya okungenani amava abangela umdla avela kuhlelo lwamva nje lala maphephancwadi. I-Geoinformatics 1. Amava omsebenzisi kusetyenziso lweSoftware yeGIS evulekileyo. Kuyathakazelisa ukufunda eli nqaku, elisibonisa ukuba yintoni ...
Oku kujongeka njengokuqikelela kuka-Epreli ka-Epreli, kodwa akunjalo. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo isivumelwano sentsebenziswano sasazisiwe ngokusesikweni malunga nokuva kwethu okuthile emfihlekweni, kwaye oko kusishiya sicinga ngento enokwenzeka phakathi kweenkampani ezimbini i-Bentley Systems kunye ne-Trimble Dimensions.
I-GeoInformatics isothuse kule nyanga ngohlelo olubonisa izitishi ezingama-49 ezahlukeneyo kwitafile ethelekisa enokuba luncedo kakhulu kwabo bafuna ukwenza isigqibo ngexesha lokuthenga, kunye nokugcina umkhondo womzekelo yavela kwisibini ...